Lo mbono ubonisa ukuba usetyenziso lweMozulu luya kujongeka njani kwi-iPadOS | Iindaba ze-iPhone
Ingelosi Gonzalez | 27/04/2022 17:00 | iOS, iPad
iPadOS Yeza njengenkqubo yayo yokusebenza ye-iPad kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Nangona kunjalo, kude kube ngoko, i-iOS yahlengahlengiswa kwiimfuno zazo zonke ii-iDevices ngenjongo yokubonelela ngenkqubo yendalo epheleleyo. Kodwa kwakukho imida ethile. Kwiminyaka emininzi, abasebenzisi balinde isicelo esisemthethweni seMozulu ukuba sifike kwiscreen esikhulu se-iPad. Ngokuchasene noko kulindelweyo, asizange sibone i-glimmer yethemba lokuba i-Apple iza kuzisa i-app kwi-iPad. Lo mbono mtsha ubonisa ukuba usetyenziso lweMozulu luya kujongeka njani kwi-iPad kwaye zeziphi iimpawu ezongezelelweyo ezinokungeniswa.
Ngaba i-iPadOS 16 iya kuba luhlaziyo olubandakanya iMozulu ye-iPad?
Le ngcamango entsha epapashwe nguTimo Weigelt kwi Behance i-muestra ukuba iMozulu ye-app iza kujongeka njani kwi-iPad. Xa ujonga nje kuqala kubonakala ngathi yikopi elula phakathi kwe-iOS app kwiscreen esikhulu ngakumbi. Nangona kunjalo, iiyantlukwano ezincinci ezingeniswa kuyo yonke ingcamango ziya kunika izitshixo zokwahlula ii-apps ezimbini.
Okokuqala, iibhloko zolwazi zinokwenziwa ngokwezifiso ngokungathi ziziwijethi ngokongeza, umzekelo, 'imvula' okanye 'icala lomoya'. Ngalo msebenzi siza kuvumela yenza izikrini zexesha eliqhelekileyo ngokusekelwe kwidatha esingathanda ukuyazi nangaliphi na ixesha. Nam ndiyazi ingazisa indlela entsha yokujonga umhlaba kuba usetyenziso olusemthethweni lungenalo uyilo lwenkangeleko yomhlaba. Olu luyilo luya kujongeka lukhulu kwiscreen se-iPad kunye noyilo lwekholamu kabini apho iindawo zokubonisana ziya kuba ngasekunene kunye nolwazi lwemozulu ngasekhohlo.
I-iOS 16 iya kuzisa utshintsho olukhulu kwiiNdlela zokuGxininisa
Kwelinye icala, yongeza iimephu ezihambayo ezintsha ezahlukeneyo kwezo zomoya kunye nemvula ezinokunika ulwazi oluninzi kubasebenzisi. Kwaye, ekugqibeleni, uphawu oluncinci longezwa ukuba usetyenziso luya kwenziwa ngeCatlyst, nayo inokuvumela ukuzisa usetyenziso lweMozulu kwi-macOS entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » Lo mbono ubonisa ukuba usetyenziso lweMozulu luya kujongeka njani kwi-iPadOS
Ezona zixhobo zibalaseleyo kwiimveliso zakho zeApple